အဲဒီလောက်ကြီးမကြမ်းနဲ့ကွာ .. နာတယ်”” ပူကနဲ နားထဲတိုးဝင်လာသော အသံကြောင့် ခြေ အစုံကို ဖျတ်ကနဲ ရပ်လိုက်ရသည်။ ““ဘွတ် စွပ် ဘွတ် ဘွပ် စွပ် စွိ ပြတ်”” ““ဟို့ အိုး အိုး ကျွတ်ကျွတ် အရမ်းကြပ်တာပဲ ကွယ်”” ““နာရော နာသေးလား ဟင်”“ ““အ အ အခုန လောက်တော့ မနာတော့ဘူး”” သုံးထပ်သား ခန်းစည်း လေးအတွင်းမှ တီးတိုးသံလေးများကို သူ့နားက သဲသဲ ကွဲကွဲဠကြားနေရသည်။ ““ကောင်းလိုက်တာ အင်း အင်း အင့် အင့်”” ဒါ ထက်ကျော်အသံ သူမှတ်မိသည်။ ကောင်မ လေးအသံက မပီမသ ဗလုံးဗထွေးနှင့် ညီးတွားသံ တိုးတိုး လေးစုပ်သပ်နေသံလောက်သာ ထွက်ပေါ်နေရာ ခေး ဆိုသော ခလေးမလေးပင်ဖြစ် နေလေသလား။ ခွန်ဂျာ့ရင်သည် အတိုင်းအဆမဲ့စွာ တုံရီလှုပ်ရှားလာ၏။
လက်ထဲမှ ကူးပြီးသား ဓါတ်ပုံအိတ်ကို စားပွဲပေါ် အသာချထားကာ အခန်းတွင်းသို့ တံခါးကို ဟလျက် ချောင်းကြည့်လိုက်သည်။ ““မြန်မြန်လုပ် အစ်ကိုရယ် မပြီးသေးဘူးလား”” ““ပြီးတော့မှာပါကွယ် တအောင့်လေးနော် ..နော်””ထက်ကျော်ဖင်ကြီးက လုံးဝပြောင်စင်ကာ လုံချည်မရှိ အောက်မှပက်လက်အနေအထားနှင့်ပေါင်နှစ်ချောင်း ကားထားသော ကောင်မလေး စောက်ပတ်ထဲသို့ ထက် ကျော်လီးကြီးက ပိုင် ရိုက်သွင်းနေသလို စိုက် စိုက်ဆင်း နေသည်။ ““ခေး”” ရယ်ဟု သူက မျက်ရည်ဝဲစွာ ရေရွတ် သည်။ မနုဿမုဆိုး ထက်ကျော်လက်အတွင်း သက်ဆင်း မိမှတော့ ခေးဘ၀ ဤသို့သာ ကားလိပ်ချရမည်ကို ခွန်ဂျာ ကြိုတင်သိထားနေသလိုပင်။ စောက်ပတ်နှစ်ခြမ်းက ကြီးမားသော လီးမဲမဲ ကြီးအ၀င်အထွက်၌ ဘေးသို့ ပြန့်ကားလိုက် စုလိုက်ဖြင့် လှုပ်ရှားနေသည်။ ထက်ကျော်ဂွေးစိကြီးကမူ စောက်ဖုတ် အောက်ခြေ ဖင်နှစ်ခြမ်ားကားကို ဖတ်ခနဲ ဖတ်ခနဲ မှန် မှန်ရိုက်ပေးနေသည်။မိုးပေါ်သို့ ဖဝါးလှန်ကာ မြောက်ထားသော ကောင်မလေးခြေချောင်းလေးများ ကုတ်ကွေးနေရှာ သည်။ ““ဆောင့် .အင့် အင့် နာနာလေး အစ်ကိုရယ်”” ““ဒါနဲ့ ဆောင့်တာ နာတယ်ဆို”” ““အဟွန်း နာလို့ နာတယ် ပြောတာပေါ့ ခုမှ မနာတာ”” ထက်ကျော်ဖင်ကြီးကို ဆွဲမြောက်လိုက်၏။ လုံးပတ် ငါးလက်မနီးပါး ကြီးမားကာ စောက်ရေများနှင့် ပြောင်လက်နေသောလီးကြီးက စောက်ဖုတ်လေးထဲမှ ကျွတ်လုနီးပါးထွက်လာသည်။ စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းလေး အောက်ခြေ၌ ဖြူလွလွ မြုပ်ပူစီဗောင်းလေးများ အစီအရီ စုပြုံတွဲခိုနေကြသည်။ တင်းတင်းလေး စေ့သွားသော အကွဲကြောင်းကြား၌ လီးဒစ်ကြီးကား အပြင်သို့ ငါးမျှာချိပ် တစ်ချောင်း လို ဆွဲထွက်လာသည် စောက်ပတ်အတွင်းသား ရဲရဲ လေးများ လန်ထွက်လာ၏။ ““ရှူး အား ကျွတ်ကျွတ် အစ်ကိုရယ် အစ်ကို့ ဟာကြီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်တာ ရင်ထဲကို ဟာတာတာကြီး ဖြစ်ပြီး ကျန်ရစ်တာပဲ တစ်မျိုးကြီးနော် .. အင်းဟင်း ဒါဖြင့် အမြဲတတ်ထားပေးမယ်လေ ဟင် သွား ဒီက အ ကောင်းပြောတာ ဆောင့်မယ်နော် စောက်ပတ်ကို လက် နဲ့ဖြဲထား မောမော ဟိုက်ဟိုက်အသံနှင့် ထက်ကျော် အ မိန့်ပေးသလိုပင် ကနုကမာ ရောင်တောက်နေသော လက်သည်းရှေည်လေးမျာပါသည့် လက်ချောင်းဖွေးဖွေး လေးနှစ်ဖက်က စောက်ပတ်ကို ဆွဲဖြဲပေး၏။
အစိလေးကပြူးပြီး ထောင်နေသည်။ ထိုစောက် စိအောက်ခြေအတွင်းပိုင်း အသားနုလေးများ လှုပ်လှုပ်ရွရွ ပေါ်ထွက်လာသည်။ စောက်ပတ်အတွင်းမှ ကြ ထွက်နေသော စောက်ခေါင်းဝ အသားစိုင်များက အမဲ သားနှယ် ရဲရဲနီကာ လီးထိပ်ကြီး မ၀င်မီ ခေတ္တမျှ ပိတ်ဆို့ နေကြ၏။ ““ဘွတ်””ခနဲ အသံနှင့်အတူ ထက်ကျော်၏ လီးထိပ်ကြီးက စောက်ခေါင်းထဲသို့ စိုက်နစ် တိုးဝင် သွားသည်။ ““အီး ဟီး ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်”” ကောင်မလေး ညီးတွားပုံက မချိမဆ့်နိုင်လွန်းလေရာ ကြားရသူ ခွန်ဂျာရင်၌ပင် နင့်တင့်တင့်ကြီးဖြစ်သွားစေလေသည်။ ထက် ကျော်၏ ရာဇ၀င်လူဆိုး စာရင်းဝင် ပစ္စည်းကြီးက အသစ် စက်စက် စောက်ပတ်လေးအတွင်းသို့ ပယ်ပယ်နယ် နယ်ကြီး လိုးဝင်နေသည်မှာ ရှည်ကြာလွန်းလှသည်ဟု သူထင်လေသည်။ ၀င်သည် ၀င်နေသည် ၀င်နေဆဲ ကာလမှာပင် ထက်ကျော်ဖင်ကြီးက တဖြေးဖြေး နိမ့်ဆင်းနေသည်။ ““အင်း .. ဟူသော ကောင်မလေး၏ ညီးတွား သံလေးက ထက်ကျော်လီးကြီး အဆုံးရောက်မှ အင့်အင်း ဟု အဆုံးသတ်လိုက်သည်ကိုလည်း တွေ့ရကြားရ၏။ ထက်ကျော်က လူယုတ် .. စောက်ပတ်နှင့် ဖင်အကွဲကြောင်းစပ်ကြား အသားနုနေရာလေးကို လက်ညှိုးဖြင့် ရစ်ဝိုက်ပါတ်သပ်ပေးသည်။ လီးကြီးအဆုံးဝင် ထာသဖြင့် တနင့်တပိုးခံစားထားရသော ကောင်မလေး ခမျာ ဖင်ကြားကို လက်ညှိုးနှင့် အမွှေခံရသောခါ ကတုံ ကရီလေးဖြစ်လာသည်။ စောက်ပတ်နှစ်ခြမ်းက ထက် ကျော်၏လီးတန်ကြီးကို ခါးသိမ်သွားမတတ် ယောင်၍ ယောင်၍ ညှစ်ပြစ်လိုက်ရှာသည်။ အခန်းဝမှချောင်းနေ သော ခွန်ဂျာဘက်သို့ ဖင်နှစ်ခုက လှည့်ထားလေရာ ထိုသို့ ကောင်မလေး စောက်ပတ်ကို ညှစ်လိုက်ခြင်းကို ခွန်ဂျာ ထင်ထင်ရှားရှားကြီးတွေ့လိုက်ရသည်။ထိုအခါ ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင်ခွန်ဂျာ့လီးအရင်းက ““တင်း””ကနဲ ယောပြီးခံစားလိုက်မိပြန်သည်။ ““ကွာ အဲလို မလုပ်နဲ့ ဟင့် ဟင့် မလုပ်ပါနဲ့ဆို”” ““ခံလို့မကောင်းလို့လား ဟင်”” “ ယားတယ် ဖင်ထဲက တစ်မျိုးကြီးပဲ”” ““ဒါဖြင့် ဖင်ကိုလိုးပေးမယ်လေ”” ““ဟေ့ အေးကွာ အဲဒါတော့ မလုပ်နဲ့”” ““ခံကြည့်ပါအုံး မကောင်း တော့မလုပ်ဘူးပေါ့ ဘယ့်နှယ်လဲ”” ““ဟင့်အင်း ဟင့်အင်း မဟုတ်တာသိပ်လုပ်ချင်တာပဲ”” ““စောက်ပတ်ကအမြဲ လိုး နေရတာ ရိုးနေပြီ နော်လို့”” ““ကျွတ် အကိုကလဲ ရှေ့ဖင် ပဲလုပ်ပါကွာ”” ထက်ကျော်ဘာမှ ဆက်မပြောတော့ ကောင်မလေးဖင်ကြားကိုမွှေနေသော လက်ချောင်းက လီးတန် နှင့်အတူ စောက်ပတ်ထဲသို့ ညင်ညင်သာသာ ယှဉ်တွဲ ထိုးသွင်းလိုက်သည်။ ကြည့်ပါလား လက်ကောလီးရော နှစ်ခုသွင်း ပြန်ပြီ အစ်ကိုကြံကြံဖန်ဖန် သိပ်လုပ်တာပဲ နာတယ် သိလား။ ထက်ကျော်လီးဘေးမှ လက်ညှိုးကို ပြန်နှုတ် လိုက်ပြန်သည်။
ဖင်ကြီးကို မြောက်ခါ မြောက်ခါ ခတ် သွက်သွက်လေး ဆောင့်လိုက်၏။ ““ဘွတ်စွတ် ဘွတ်စွတ် ကွိ ပိ ဘွတ်စွပ်”” “အင့်““အင့် အင့် အင့်”” ““အစ်ကို့လီးကို အားရရဲ့လားဟင် ချိုမာ”” ““အိုး ဘာတွေမေးမှန်းမသိဘူး သွားကွယ်”” ချိုမာတဲ့ ဝိုင်းမဟုတ် တော်ပါသေးရဲ့ ခွန်ဂျာ ရှေ့သို့ခြေတစ်လှမ်းတိုးဖြစ်သည်။ သောက ကင်နိုင် သော စိတ်နှင့်လည်း လီးကဆတ်ခနဲ ဆတ်ခနဲတောင် ပေပေပြီ။ ““ချိုမာ အားမရမှာစိုးလို့ပါ”” ““အမလေး လေး အစ်ကိုရယ် ဒီလောက်ဟာကြီးနဲ့ ချိုမာ့ဟာလေးထဲ လုပ်နေတာတောင် သေလုနီးပါးခံနေရတာ ဒီထက်ကြီးရင်တော့ စုတ်ပြတ်ကုန်မှာ ဟင်း ဟင်း ဟင်း ”” နှစ် ယောက်သားငြိမ်သွားသည်။ ထက်ကျော်ဖင်ကြီးက အကြောဆွဲသလို ဆတ်ခနဲ ဆတ်ခနဲ တုံခနေတုန်းဖြစ်သည်။ချိုမာဆိုသော ကောင်မလေးက ထက်ကျော် ဖင်ကြီးကို ဆွဲကာ ဆွဲကာ ဆောင့်ရင်း တဟင်းဟင်း တအင်းအင်းနှင့် တွန့်လိမ် နေရှာသည်။ ထက်ကျော်လီးကြီးက ချိုမာ့၏စောက် ပတ်လေးအတွင်း၌ အရင်းအထိ စိုက်ဝင်ကာ တွင်း အောင်းရင်းအတွင်း၌ တုံခါနေမည်ကို ခွန်ဂျာ တွေးမိ လေသည်။ ထက်ကျော်ပုခုံးကိုမေးတင်ကာ မှိန်းနေ သော ကောင်မလေး မျက်နှာကိုအခုမှ သူတွေ့ရသည်။ ငယ်ရွယ်နုနယ်လွန်းသော ချာတိတ်မလေး မျက်နှာက ကော်ပတ်ရုပ်ကလေးနှယ် သန့်စင်လှပသည်။ နက်မှောင်သောဆံပင်လေးများက ပန်းနုရောင် ခေါင်း အုံးကြီးပေါ်၌ ပျံဝဲ ဖွာဆင်းနေသည်။ မှေးစင်းထား သော မျက်လုံးအစုံသည် တလှုပ်လှုပ် ..။ ““နောက်တစ်ချီ လုပ်အုံးမလား”” ““ကျောင်းလွှတ် ပြီးပြီ ကို ရဲ့ ကျောင်းပြန်နောက်ကျရင် အမေဆူမှာ နောက်မှနော် နော်လို့” ” ချိုမာသဘောပါ”” ငနဲသားအသံ က မကျေနပ်သလိုလို ၀မ်းနည်းသလိုလို “ “လုပ်ပြီ ကိုကလဲဒီလောက်လုပ်ရတာကို အားမရနိုင်ဘူး သူ့မှာ” ” ချိုမာ့ဖက်ကလဲ ပြန်ကြည့်အုံး”” ထက်ကျော်က နှာခေါင်း မှ ဟင်းကနဲသက်ပြင်းမှုတ်ထုတ်ရင်း ချိုမာ့ဗိုက်ပေါ်မှ ခွာ၍ထသည်။ချိုမာရော ထက်ကျော်ပါ စောက်ပတ်နှင့်လီးတို့ပြိုင်တူငုံ့ကြည့်မိကြသည်။ သုတ်ရေများ စေးကပ်ပြစ်ချွဲနေသော စောက် ပတ်အတွင်းမှ ထက်ကျော်လီးကြီးကို ဖြေးဖြေးခြင်းဆွဲ ထုတ်လိုက်သည်။ ““နဲနဲပျော့သွားပြီ ..နော်”” ချိုမာက လီးတန်ကြီးကို လက်ချောင်းအဖျား လေးများနှင့် ကိုင်ရင်းထက်ကျော်ကိုမော့ကြည့်ရင်း ပြော လိုက်လေသည်။ ““နောက်တစ်ချီလောက်လိုးရင် ရသေးတယ်”” ““တော်ပါတော့”” ချိုမာက မျက်စောင်းလေးထိုးကာ ပြုံးရင်း ရှက်စနိုးလေးပြောသည်။ ထက်ကျော်ရင်ဘတ်ကြီး ကို ပြတ်ခနဲ နှုတ်ခမ်းနှင့်စုပ်ပြီးမှ ကုတင်ခြေရင်းတွင် အေးစက်စွာ ပုံထားသော ထမီစိမ်းလေးကို လှမ်းယူ လိုက်ခါ ခြေထောက်မှစွပ်သည်။
ထက်ကျော်က အရှိန် မသေသေးပဲ ချိုမာ့မျက်နှာနုနုလေးကို လက်နှစ်ဖက်နှင့် ဆွဲယူကာ နီစွေးရွှမ်းစိုသော နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို ချိုမြိန် စွာ စုပ်ယူလိုက်သည်။ ထို့နောက် ကုတင်ပေါ်မှာပင် မတ်တတ်ရပ်လိုက်လေရာ ခပ်ငိုက်ငိုက်ကြီး တွဲကျနေသော လီးကြီးက ချိုမာပါးစပ်လေးနားတွင်ရောက်သွားလေ၏။ ““ဟင်း သွား”” ချိုမာက ကဗျာကယာ မျက်နှာ ကို လွှဲဖယ်ပြီး ကုတင်ပေါ်မှ ဆင်းလိုက်သည်။ ထက် ကျော် ပုဆိုးကိုလဲပြစ်ပေးလိုက်သည်။ ““ဒါပဲနော် ကို ချိုမာ ကတော့ တစ်ကိုယ်လုံးပေးပြီးပြီ ချိုမာ့ကို သစ္စာဖေါက်ရင်တော့ မလွယ်ဘူး”” အာဂ ချာတိတ်လေးပဲဟု ခွန်ဂျာတွေရင်း အ ခန်းဝမှခွာသည်။ စားပွဲရှိ ဓါတ်ပုံအိတ်ပေါ်၌ ကမ်းက တမ်း ခွန်ဂျာဟု လက်မှတ်ထိုးကာ အိမ်ပေါ်မှ အလျင် အမြန်ဆင်းလိုက်သည်။ဝိုင်း မဟုတ်ခြင်းအတွက် သူပျော်သွားမိခြင်းကို ပြန်လည် စမ်းစစ်ကြည့်သည်။ ချိုမာဆိုသော ကောင်မ လေးနှင့် ထက်ကျော်တို့ ဇာတ်လမ်းကိုဝိုင်းသိလျင် .. စင်စစ်ကတော့ ဝိုင်း မသိသော ထက်ကျော်၏ ပုံပြင်မြောက်များစွာရှိနေသေးသည်ကိုမူ ခွန်ဂျာ သိနေ ခဲ့သည်။ အင်းလေ ဒါကြောင့်ပဲ ဝိုင်းအုံချစ် ဆိုတဲ့ ကောင် မလေးအတွက် စိုးရိမ်မိတ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပါ နော။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ရေမြန်မြန်ချိုးပြီး သံပုရာရည် ချဉ်ချဉ်တစ်ခွက်ကိုသောက်ပြစ်လိုက်ရသည်။ အလုပ်စားပွဲအတွင်းမှ ဝိုင်း ၏ အောက်စလွတ်နေသော ဓါတ်ပုံလေးကို ထုတ်ကြည့်လိုက်မိသည်။ မ ကြာမီလေးတင်ကမှ တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ရသော ချိုမာဆိုသော အထက ကျောင်းသူလေး တစ်ဦးနှင့် မနုဿမုဆိုး ထက် ကျော်တို့၏ နေ့ပွဲကြီးကို မျက်ဝါးထင်ထင်ကြည့်မြင်ခဲ့ရ သော ခွန်ဂျာအဘို့ အောက်စလွတ်ကာ စောက်ဖုတ်အ ကွဲကြောင်းလေး ထင်းနေအောင် မြင်နေရသော ဝိုင်း ဓါတ်ပုံလေးကို ကြည့်ရုံမျှနှင့်ပင် ခွန်ဂျာ လိုးချင်စိတ်များ တဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်လာသည်။ အလုပ်စားပွဲ၌ထိုင်ရင်း လီးကြီးကို တင်းတင်း ဆုတ်ထားမိ၏။ ဒိတ်ကနဲ ဒိတ်ကနဲ လက်ဖဝါးကို သွေး တိုးနေသည့် အထိ အတွေ့ကိုခံစားနေရသည်။ လီးထိပ် မှ ချွဲပြစ်သော အရေကြည်များ ယိုစီးလာ၏။ ထက်ကျော် ကဲ့သို့ သူများသားပျိုသမီးပျိုလေးများကို ဖျက်ဆီးလို သောဆန္ဒလဲမရှိ။ ယောက်ျားပီပီ ကိုင်ချင်သည်ကတော့ အမှန်။ ထို့ကြောင့် ပုဆိုးကို အသာလျော့ချလိုက်သည် မတ်ထောင်နေသောလီးကြီး တစ်ချိန်က ရွယ်ရွယ်ဆို သော ကောင်မလေးကို အကြိမ်ပေါင်းများ စွာလိုးခဲ့သော လီးကြီး .. ယခုမူ စောက်ပတ်နှင့်ဝေးကွာ နေခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာခဲ့ပြီး လီးဖြစ်ပါလျက် လီးအစာ မစားရသော ခွန်ဂျာ့လီးကြီး ဘာကြောင့် ဝြဖိုးနေသနည်း.. မသန်မစွမ်းချိနဲ့စွာ လူမမာတစ် ယောက်နှယ် ပျော့တိ ပျော့ခွေဘာလို့ မဖြစ်ရသနည်း။ စိတ်က ပူထူနေသည် ယခုကဲ့သို့ ကာမဆန္ဒဖြစ်ပွားပေါက်ကွဲမှုမျိုး မကြာခဏခံစားရသော်လည်း ယခု ဝိုင်းစောက်ဖုတ်ကြီးကို ဓါတ်ပုံထဲ၌ ထင်ထင်ရှားရှား ပြတ်ပြတ်သားသားတွေ့ရမှ ပို၍ ခံစားရသည်။ ထိုစောက် ဖုတ်ကြီးကိုပဲ လိုးချင်နေမိသည်။ လက်တွင်း၌ ဆုတ်ကိုင် ထားသော လီးကြီးက လက်ဆုတ်အာနေအောင် တုတ် ခိုင်ထွားကြိုင်းနေသည်။ ရွယ်ရွယ်နှင့် အိမ်ထောင်ကျစဉ်က သူ့လီးဤမျှလောက်မကြီးသေးဟု သူထင်သည်။
မောင်က ရွယ်ကိုစတင်လိုးခဲ့ကြစဉ်က ရွယ်ရွယ်က ဤသို့ပင် မျက်နှာကို စောင်ဖြင့် အုပ်ထားခဲ့ သည်။ ထိုသို့စောင်အုပ်ခါ ရွယ်ရွယ်လုပ်သမျှ ငြိမ်ပြီးခံစားရ သော အရသာမှာလည်း ကိုယ်က ဦးဆောင်လိုးရသော အရ သာနှင့်တော့ အတော်ကြီးကွာခြားပြန်သည်။ မျက်စေ့ကို မှိတ်ခါအထိအတွေ့ကို ရင်တစ်ခုံခုံခံစားရသော ယောက်ျားတစ်ယောက်၏ ညင်သာသော အထိအတွေ့ မျိုးကရှားပါးလိမ့်မည်ထင်သည်။ ရွယ်ရွယ်က ယင်းသို့ နွေးထွေးစွာ ရင်ခုံစေ တတ်သော အပြုအမူလေးများကို ပြုတတ်သည်။ လီး ထိပ်ကို ချွဲစေးသော အရေလေးများနှင့် ရောနှောကာ ပွတ်သပ်လျက် နှိုးဆွပေးတတ်သလို ဂွေးစိကိုလဲ မနာ မကျင်လေးဆုတ်နယ်လျက် လီးတန်ကြီးကို ဂွင်းတိုက် ပေးတတ်သေးသည်။ ဤမျှ အပြုအစုကောင်းသော ရွယ်ရွယ့်အား ချွန်ဂျာဘယ်သို့မေ့၍ရနိုင်ပါမည်နည်း။ လီးထိပ်ကြီးကို စ ကောဝိုင်း လှုပ်ရှားရင်း စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားများကို နှုတ်ခမ်းနီဆိုးသကဲ့သို့ ပြုမူလေတိုင်း ခွန်ဂျာပါးစပ်ကြီး အဟောင်းသားနှင့် အလွန်အမင်း အရသာထူးစွာ ခံစား ဖူးခဲ့ရသည်။ ချစ်စွာသော ရွယ်ရွယ်လေး၏ စိတ်လက်ပါ စွာဖြင့် ကိုင်တွယ်လှုပ်ရှားမှုတိုင်း၌ ခွန်ဂျာမေ့မေ့မူးမူး မျောပါခဲ့ရသည်။ လီးအပေါ်သို့ စောက်ပတ်အ၀ကို တေ့ပြီး ညင် သာစွာထိုင်ချလိုက်သောအခါ နွေးအီသော လီးထိပ်မှ အရသာသည် နှလုံးသားမှဆင့်ကူးစိမ့်ဝင်၍ တစ်ကိုယ် လုံးကို ပျံ့နှံ့ခံစားသွားစေခဲ့သော အထိအတွေ့လေးများ ယခုမူ ဝေးခဲ့ရပြီ .. စာရေးစားပွဲ၌ အတန်ကြာ ထိုင်ရင်း မာတောင်နေသော လီးကြီးကို ဆုတ်ကိုင်ထားသော ခွန်ဂျာ့လက်သည် တင်းကျစ်နေ၏။ လက်ဖဝါးအတွင်း ၌ အကြောကြီးများထောင်ကာ ဖုထစ်ရုးကြနေသော သူ့လီးကြီးကို ဘယ်သို့ ဖြေသိမ့်ရမည်မသိအောင် ခံစား နေရသည်။ စားပွဲပေါ်၌ သူ့အား ပြုံးရွှင်ရွှန်းစိုစွာ ကြည့် နေသော ဝိုင်းအုံချစ် ဓါတ်ပုံလေးကို စိုက်ကြည့်လိုက် သည်။ ထမီအောက်စလေးလွတ်နေသော ဝိုင်းအုံချစ်ထိုငနေပုံလေးက ဖိတ်ခေါ်နေသလိုရှိသည်။ မျက်နှာ လေးက ပကတိရိုးသားသန့်စင်နေခြင်းအတွက် ဓါတ်ပုံရိုက်စဉ် မိမိစောက်ပတ်ကြီးကို အထင်အရှားပေါ်လွင် နေသည်ကို မသိသည်မှာ သေချာသည်။ ခွန်ဂျာက လည်း နက်ကတစ်များရစဉ်ကတည်းက ထိုပုံလေးကို မျက်စေ့ထဲ၌ စွဲထင်နေရာ အပီအပြင် ကူးပြီးသောအခါရင်၌ အတိုင်းအဆမရှိ ဆန္ဒမီးက အဟုန်ပြင်းစွာ တောက် လောင်ခဲ့ရလေသည်။
လိုးချင်စိတ်များ ထကြွလာလေလေ ချစ်ခဲ့ရသော ရွယ်ရွယ်ကို သတိရလေလေ ဖြစ်လာရ သည်။ ရွယ်ရွယ်သာရှိလျင် သူမအခြေအနေမျိုး၌ ထမင်းပင်ချက်ကြမည်မထင်။ တစ်ယောက်တည်း ငိုင်တွေကာ ပုဆိုးကို ဆီးစပ်အထိလျောကာ ကြီးမားတုတ်ခိုင်သော လီးကြီးကို ကိုင်ထားလေသော ခွန်ဂျာသည် စတူဒီယို အခန်းဆီသို့ တစ်စုံတစ်ယောက် ညင်သာစွာဝင်လာ သည်ကို သတိမထားလိုက်မိချေ။ အခန်းတစ်ခုလုံး တိတ် ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှိသည်။ တစ်ဖက်ဖွင့်ထားသော ပြူ တင်းပေါက်မှ အေးမြသော လေစိမ်းလေးက ညင်ညင် သာသာ တိုက်ခတ်နေ၏။ တစ်ယောက်တည်း ငြိမ် သက်နေသော ခွန်ဂျာနှုတ်ခမ်းအစုံသည် တဆတ်ဆတ်တုံရီနေသည်။ လက်တွင်း၌ ဆုတ်ကိုင်ထားဆဲဖြစ်သော သူ့လီးကြီးမှာ ထိပ်ကြီး တင်းကာ ခရမ်းသီး ကြီးတစ်လုံးနယ် ပြောင်တင်းနီရဲနေသည်။ ဆာလောင် ငတ်မွတ်နေသော သူ့လီးကြီးကို ဆုတ်ကိုင်ထားရင်း ခွန်ဂျာ ၀န်းကျင်ကိုမေ့နေသည်။ အပြင်ခန်းကတည်းက ဝိုင်း အသံပြုကြည့်သည်။ အိမ်ရှေ့ခန်းတံခါးကြီး ပွင့်နေသည့် အတွက် စတူဒီယိုအဖြစ်အသုံးပြုသော နောက်ဖက် အခန်းသို့ ဆက်ဝင်ခဲ့မိသည်။ ဒါသည်ပင် ဝိုင်းအမှား ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါမည်။ စာရေးစားပွဲ၌ ငြိမ်သက်ကာ ဓါတ် ပုံတစ်ပုံကို စိုက်ကြည့်နေသော ခွန်ဂျာ့ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ တစ်ကြိမ်တည်းသော တွေ့ဆုံသေးသော ခွန်ဂျာ ကို ဘယ်သို့နှုတ်ဆက်ရမှန်းမသိ။ သို့သော် ခြေလှမ်းတို့ က ခွန်ဂျာ့အနီးသို့ တရွေ့ရွေ့တိုးကပ်သွားနေမိသည်။ ထို အခါ ခွန်ဂျာ့စိုက်ကြည့်နေသော ဓါတ်ပုံကို ဝိုင်း အ သေအချာတွေ့လိုက်ရသည်။ တွေ့လိုက်မိသည်နှင့် တစ်ကိုယ်လုံးရှိ ပုံမှန်စီး ဆင်းနေသောသွေးကြောများ ရပ်ဆိုင်းသွားသလို ခံစား လိုက်ရသည်။ ဝိုင်း၏ ခြေလှမ်းများတုံ့ဆိုင်းသွားကုန် သည်။ ရှေ့တိုးရခက် နောက်ဆုတ်ရခက်တွေဖြစ် ကုန်သည်။ နှလုံးသွေးများ တဒိုင်းဒိုင်းခုံအောင်လည်းခံစားရသည်။ ရင်၌ မောလှိုက်တုံရီသော ဝေဒနာကိုလည်း ခံစားရသည်။ ဓါတ်ပုံက ဝိုင်းရဲ့ပုံလေ ကြည့်ပါအုံး ထိုင်ထား လိုက်တာ အောက်က ဟောင်းလောင်း.. ဘယ် လောက်ရှက်ဖို့ကောင်းလဲလို့ အိုး ထမီကြားက ထင် ထင်ရှားရှားကြီးပေါ်နေတာကလဲ တမင်တကာ ထမီကို လှန်ပြီး ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံထားသလိုကြီး။ ဟင် သူ ပုဆိုးကိုလျော့ချွတ်ပြီး မတ်တောင် နေတဲ့သူ့ဟာကြီးကို ကိုင်ထားလိုက်တာ။
သူ့စိတ်ကူးယဉ်နေမှာပေါ့ ဝိုင်းရဲ့ အောက်စလွတ်နေတဲ့ပုံကို ကြည့်ပြီး စိတ်နဲ့ပြစ်မှားနေမှာပေါ့။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မသိမသာ ပြန်ထွက်သွားလို့ရော ရမလား အင်း မသိလိုက်ရင် ကောင်းသား တော်ကြာ သူ့ကိုတွေ့ပြီး သူ့ဟာကြီး သူကိုင် ထားတာ မြင်လို့ဝိုင်းက ပြန်လှည့်ပြေးတယ်ဆိုရင် ဘယ်တော့မှ ရင်ဆိုင်ရဲကြမှာမဟုတ်ဘူး။ ဘာလုပ်ရ မလဲ သူ့ဟာကြီးကလဲ သနားစရာကောင်းလောက်အောင် ဆာလောင်နေရှာပုံပဲ ခက်ထာက ဝိုင်းက ဘယ် ယောက်ျားနဲ့မှ အလိုးခံဖူးသေးတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကိုကြည့်ပြီး အလိုလိုနေရင်း သနားသလိုခံစားမိရ ပြန်တယ်။ ဟုတ်တယ် ခွန်ဂျာဆိုတဲ့ဓါတ်ပုံဆရာလေးကမိန်းကလေးတွေ ဓါတ်ပုံမရိုက်ဘူးလို့ အင်မတန် နံမည်ကြီးနေတာ အခုဝိုင်းနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖြစ်ကြပြီး ခွန်ဂျာမှာဒီဝေဒနာကြီးခံစားနေရတယ်ဆိုတော့ ဝိုင်း စိတ်ကောင်း နိုင်မလား ဝိုင်း ရပ်နေရာက မသိမသာ သူ့ဟာကြီးကိုခိုး ကြည့်မိပြန်တယ်။ခွန်ဂျာဟာ မိန်းမရဘူးတယ်ဆိုတာ ဝိုင်း သိပါတယ်။ ဒါကြီးနဲ့ အလိုးခံခဲ့ရတဲ့ ခွန်ဂျာရဲ့မိန်းမလဲ ခွန်ဂျာကို ချစ်မှာ။ သိပ်ချစ်မှာပါပဲ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေ ခွန်ဂျာဆိုတဲ့ ကချင်လေးဟာ တကယ့်ကို ကျန်းမာသန် စွမ်းတဲ့ယောက်ျားကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့ပဲပေါ့ ဝိုင်းအသက် (၁၈)နှစ်ထဲဝင်နေပါပြီ ဟိုဒင်း လိုးမယ်ဆိုရင်လည်း ရနေပြီပေါ့။ ခလေးလဲမွေးနိုင်ပြီပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အချစ်ဆိုတာ မသိတသိနဲ့ ရင်ခံတတ်ရုံလေးရှိသေးတာ။ ထက်ကျော်ဆိုတဲ့ ဟိုအကောင်က လက်သရမ်းလွန်းလို့ဝိုင်းမုန်းလိုက်တာ မပြောနဲ့တော့..။ ““ဆရာ ..”” မှားသလား မှန်သလား မဝေခွဲ နိုင်ခင်မှာပါးစပ်က လွှတ်ခနဲ ခေါ်လိုက်မိတယ်။ ခက် လိုက်တာ ““ဟင် ဝိုင်း ကုလားထိုင်က ကမ်းကတမ်း ကြီးထရင်း ပုဆိုးကို ပြင်ဝတ်နေတဲ့ သူ့တစ် ကိုယ်လုံးဟာ ဆောက်တည်ရာမရပဲ ယိမ်းထိုးနေရှာတယ်။ မျက်နှာတစ်ခုလုံးဟာလဲနီလို့။ ဝိုင်း ဘယ်အချိန်ကရောက်နေ တာလဲ ဟင် သူ့အသံကြားမှ သူ့ကိုပိုသနားမိပြန်တယ်။ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် ပြုမူနေတဲ့ သူ့ကို လူမိသွားတော့ သူ မနေတတ်တော့ဘူး မျက်နှာကို အောက်ငုံ့ပြီး နှုတ်ဆက် စကား ပြောနေပေမဲ့ သူဟာ အပြစ်ရှိတဲ့ ကျောင်းသား လေးလို တုံနေရှာတယ်။ ““ဝိုင်း ရောက်နေတာ ကြာပါပြီ ဆရာ”” ဘာထူး လဲ ဝိုင်းလဲ အသံတွေတုန်နေတာပဲဥစ္စာ ပြီးတော့လဲ သူ့လိုပဲ ခေါင်းကို ငုံ့ပြီး ပြောနေတာ ဝိုင်းနဲ့ သူ့ကြားမှာ ပြောစရာစကားတွေ ကုန်သွားတယ်။
ဘာကစပြီးပြောရမှန်းမသိအောင်လဲ ခံစားကြရတယ်။ ““ဒီပုံကို ကျနော် တမင်ရိုက်တာမဟုတ်ဘူး”” ““ဝိုင်း နားလည်ပါတယ်ဆရာ”” ““ဒါပေမဲ့ ကျနော် အရမ်းခံ စားလိုက်ရတယ်”” ဝိုင်းက သံယောင်လိုက်ပြီး ရေရွတ် နေမိသည်။ ““ဟုတ်တယ် ဝိုင်း အရမ်းခံစားရတယ် ဝိုင်းရဲ့အလှ အင်း ဝိုင်းရဲ့အလှပဲဆိုပါတော့ ကျနော့ကို ဖမ်းစားနေတယ် ဝိုင်းရယ် ကျနော် မရုန်းနိုင် မကန်နိုင် တော့ဘူး”” ဝိုင်းအလှတဲ့ ဝိုင်းရဲ့စောက်ဖုတ်ကို မြင်လို့ မနေနိုင် မထိုင်နိုင်ဖြစ်ပြီး လိုးချင်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ် နေပါတယ်ဆိုတာကို ယခု ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောတာပဲမဟုတ်လား။ ဝိုင်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးခေါင်းဖေါ်ရဲမှာလဲ ဝိုင်း အသားတွေ တဆတ်ဆတ်တုံအောင် စိတ်လှုပ်ရှားနေ မိတယ်။ စားပွဲစွန်းကို အထပ်ထပ်ပွတ်ရင်း ခေါင်းကိုပဲ တွင်တွင်ငုံ့ထားမိတယ်။ ခက်လိုက်တာ ဘာပြန်ပြောရမလဲ။ ““ဝိုင်း .. ဝိုင်းရယ်”” ကတုံကရီနဲ့ သူ့လက်နှစ် ဖက် က ဝိုင်းပုခုံးနှစ်ဖက်ကို တင်းတင်းလေး ဆုတ်ကိုင် လိုက်တယ်။ ဝိုင်းလေ ဆတ်ကနဲ တုံသွားတယ်။ ရုန်းပြစ် လိုက်ရမလား ပါးကို ဖြန်းကနဲ မြည်အောင် ရိုက်ပြစ် လိုက်ရမှာလား ဝိုင်း တဆတ်ဆတ်တုံသော နှုတ်ခမ်း တွေကို ကိုက်ရင်း သူ့မျက်နှာကို မော့ကြည့်မိသည်။ သူ့မျက်နှာက ဝိုင်းထံမှ တစ်စုံတစ်ရာ အဖြေကို မျှော် လင့်တကြီး စောင့်စားဟန် အားနည်းသော မျက်လုံး များနှင့် ကြည့်နေတသည်။ ဘာထူးလဲ .. ဘာူထးလို့လဲ။ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေလဲ တဆတ်ဆတ်တုံနေကြတာပဲ .. ““ဝိုင်း ခေါင်းကို ပြန်ငုံ့ရင်း သူ့လက်နှစ်ဖက်ကို အသာအယာ ဖယ်ချလိုက်ခါ သက်ပြင်းနှစ်ချက် ဆင့်ကဲ ရှိုက်မိ၏။ “ဝိုင်းရယ် .. ကျနော် ရိုင်းသွားသလားဟင်”” သူက စိုးရိမ်တကြီး တုန်တုန်လှုပ်လှုပ်မေးသည်။ ဝိုင်းက ခေါင်းကိုငုံ့မြဲ ငုံ့ကာ စကားမပြန်မိပဲရှိသည်။ တဆတ်ဆတ်တုန်နေသော ဝိုင်း၏ နှုတ်ခမ်းလေးများကို အနီး ကပ် မြင်သည်အထိ သူတိုးကပ်လာသည်။ နှုတ်ခမ်း ဆိုးဆေး ပါးပါးလှပ်လှပ် ဆိုးထားသောကြောင့် နှုတ်ခမ်းနီရနံ့ချိုမွှေးမွှေးလေးကို သူရှူရှိုက်မိသွား၏။ တဆက်တည်းမှာလည်း ဝိုင်းကိုယ်နံ့လေးကို သူက ပူးပူးကပ်ကပ်ရရှိလိုက်ပြန်သည်။ တစ်ကိုယ်လုံးရှိ သွေးများ ဆူကြွှလှုပ်ရှားလာကြသည်။ သူက တံတွေးကိုဂလုကနဲ မြည်အောင် မြိုချလိုက်ရင်း ဒုတိယအကြိမ်ဝိုင်း၏ ပုခုံးလေးနှစ်ဖက်ကို ဆုတ်ကိုင်လိုက်ခါ မျက်နှာ ချင်းနီးကပ်အောင် ဆွဲယူလိုက်သည်။ နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုသည် နွေးကနဲ ပူးကပ်သွားသည်။ဝိုင်း၏ မျက်တောင်ရှည်ကြီးများ မှေးစင်းကျသွား၏။လက် အစုံကလဲ သူ့ကျောပြင်ကို အလန့်တကြား ဖက်မိသည်။ နှုတ်ခမ်းချင်းထိမိရုံလေးဖြင့် ဝိုင်း တစ်ကိုယ်လုံး ဆတ်ခ နဲ တွန့်ကာ အကြောအချဉ်တွေ ပျော့ခွေချင်သွားသည်။ ““ပြွတ်..ပြွတ်”” သူက ဝိုင်းနှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကို ညင်ညင်သာသာလေး စုပ်ယူလိုက်သည်။ ဖျင်းကနဲ ခံစား လိုက်ရသည်။ ““ချစ်တယ် ဝိုင်းရယ်”” အမောတကောကြီးပြောရင်း နှုတ်ခမ်းလေးကို စုပ်ပြန်၏။ သည်တစ်ခါ သူ့လျှာနွေးနွေးဖြင့် ဝိုင်း နှုတ်ခမ်းသားလေးများကို တလစပ် ယက်သည်။ စုပ်သည်။ ချိုမြမွှေးသင်းသော နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေးလေးများ ပြောင် စင်သွားသည်။ ဝိုင်းက အသက်ကိုအောင့်ထားမိသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာတွေဖြစ်နေမှန်းကို ဝိုင်းမသိ။ မရုန်း မဖယ် မတွန်းမကန်နှင့် တလွန့်လွန့်နေိမိခြင်းကို ဝိုင်း၏ ဆူဖြိုးသန်စွမ်းသော လတ်ဆတ်သည့် သွေးများဆူကြွ လာခြင်း သင်္ကေတပင်ဖြစ်မည်ထင်သည်။ ““အခန်းထဲ သွားကြရအောင် ဝိုင်းရယ်နော်”” သူက တကယ့်ကို စိတ်လှုပ်လှုပ်ရှားရှား အသံကြီးနှင့် ပြောကာ ဝိုင်းခါးသေးသေးလေးကို ဖက်၍ဆွဲခေါ်သည်။ အခန်းထဲသွားလိုးကြမည်ဟူသော အဓိပ္ပါယ်မှန်း သိ၏။ ပူနေထူနေသောစိတ်နှင့်ခေါင်းကို ငုံ့ထားမိ၏။
ဘာဖြစ်ရတာလဲ ရုန်းပါလား .. ဝေးရာဆီကိုခွာပါလား ဝိုင်း ဟာ သံလိုက်စက်ကွင်းမိနေတဲ့သူလိုပဲ သူခေါ်ရာကို တရွေ့ရွေ့ပါသွားနေမိတယ်။ အမှားအမှန် ဝေဖန်တွေး ခေါ်နိုင်တဲ့ စိတ်တွေဘယ်ရောက်ကုန်ပလဲ အို .. သူဝိုင်းကို နှစ်ယောက်အိပ်ကုတင်ကြီးပေါ် ပွေ့တင်၏။ အ လင်းရောင်တသဲ့သဲ့မျှသာလင်းသည်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီး က ဝိုင်းအပေါ်သို့ တဖြေးဖြေး အုပ်မိုး ခွစီးလာသည်။ ဝိုင်းမောသည်။ မျက်စေ့အစုံကို မှိတ်ထားလိုက်မိ၏။လက်နှစ်ဖက်က သူ့ရင်ဘတ်ကို အထိတ်တလန့်လေးတွန်းထား၏။ အခန်းထဲမှာ နှစ်ယောက်သား၏ အသက်ရှူသံသည်သာ ပြင်းပြင်းပျပျလေး ထွက်ပေါ်နေသည်။ဝိုင်း ဘာကြောင့်မှန်းမသိ မျက်စေ့အစုံကို ဇွတ်မှိတ် ထား မိသည်။ အသိစိတ်များကမူ သူ ဘယ်နားကိုကိုင်သည် ဘာလုပ်နေသည်ကို သိနေသည်။ သူ့ထံမှ ပူနွေးသော အသက်ရှူရှိုက်သော လေကို မျက်နှာပြင်၌ ထိတွေ့ခံ စားရ၏။ ချိုသင်းသော ယောက်ျားရနံ့တစ်မျိုးကိုလဲ ဝိုင်းရနေ၏။ ခုံလိုက်တာ .. ရင်တွေ တလှပ်လှပ်ကို မော နေသည်။ သူ့စကားတွေ ပြောနေသည်ဟုတော့ ဝိုင်းထင်၏။ စကားလုံးများက တိုးလွန်း ညင်သာလွန်းပြီး ကြိပ် ၍ပြောသောစကားများဖြစ်၍ မသဲမကွဲလေသံမျှ လောက်သာ တီးတိုးပြောနေခြင်းဖြစ်၏။ တစ်ချို့ကိုလဲဝိုင်းနားလည်သည်။ နားလည်သော စကားလုံးတိုင်း ကလည်း ဝိုင်းရဲ့ရင်ကို ပူနွေးလှိုက်ဖိုစေရုံမျှမက မျက် နှာ တစ်ခုလုံးကို ထူပူစေသော စကားလုံးများသာ ဖြစ်နေ သည်။ ““ဓါတ်ပုံထဲမှာ ဝိုင်းစောက်ဖုတ်ကြီးကို မြင်ကထဲက လိုးချင်နေတာ သိလား . ဝိုင်း”” ဝိုင်း ထိုစကားကြားတော့ ရှက်လိုက်တာ။ မျက် နှာကို ပြုံးထားရမှာလား မဲ့ထားရမှာလား .. မသိ။ နောက် သူထပ်ပြောသေးသည် ဝိုင်းက မျက်နှာကို တစ် ဖက်သို့စောင်းထားပြီး အံလေးတင်းတင်းကြိပ်ထားရ၏။ ““ကိုယ်တို့လိုးကြရအောင်နော် ဝိုင်း”” ခက်လိုက် တာကွယ် ဘယ်လိုလူလဲမသိဘူး ဟုတ်တယ် ဝိုင်းက အစ်ကို့လီးကြီးကို မြင်ကတည်းက ဝိုင်းလဲခံချင်နေပါ တယ်အစ်ကိုရယ် မြန်မြန်လိုးစမ်းပါလို့ ပြောရမှာလားဟင်း အပျိုရှင့် အပျို အလိုးခံဘို့မပြောနဲ့ ကိုယ့်ဖင်တောင် ကိုယ် ငုံ့ကြည့်ဖူးတာ မဟုတ်ဖူး ယုံလား။ အဲဒီစကားမျိုးတွေ ဝိုင်းပါးစပ်က ဘယ်လိုလုပ်ထွက်မှာလဲလို့ တစ်ခါထဲ သူက မိန်းမရဘူးပြီးသားဆိုတော့ အဲဒီစကားတွေ ထွက်ရဲ ပြောရဲတာပေါ့ အို ကျွတ် နို့နှစ်လုံးကို ကိုင်ပြီး နယ်ပေး နေတယ်။
ဟာအား ကျွတ်ကျွတ် ကောင်းတော့ ကောင်းတယ် ဒါပေမဲ့ ရှက်တာလဲလွန်ရောပဲ သူအဲဒီလို လုပ်လေ ဝိုင်းက မျက်စေ့တွေကို တင်းတင်း ပိတ်ထား မိလေပဲ။ လက်ချောင်းတွေက ခေါင်းရင်းက ကုတင်တိုင် ကို စုံကိုင်ဆွဲထားမိတယ်။ လက်ဆစ်လေးတွေဆိုတာ ဖြူ တောင်နေတယ်။ အပေါ်အင်္ကျီရင်ဘတ်ကို ဆွဲဖွင့်လိုက်ပြန်ပြီ ဝိုင်း အသဲတွေအေးကနဲ ခံစားလိုက်ရတယ်သိလား နွေးနွေးပူပူ သူ့အာခံတွင်းမှာ နို့သီးခေါင်းလေး တွေကို စို့ပေးပြန်တော့ ဘာမှမဆိုင်တဲ့ ဟို ခါးဆီက ဖြင်းကနဲဖြစ်ပြီး အပေါ်ကို ကော့ထောင်လိုက်မိတယ်။ စောက်ပတ်ထဲမှာ ရွစိရွစိဖြစ်ကုန်တယ်။ အဲဒါ ဘာဓါတ်လဲမသိဘူးနော် သိပ်ဆန်းတယ် သိလား ဝိုင်း နို့နှစ်လုံးကနေမထိ လေမထိနဲ့ သန့်သန့်စင်စင်အုပ်ထိန်း လာတာဆိုတော့ စိမ်းစားဥတွလို ဖွေးနေတာ အခွံနွှာ ထားတဲ့စိမ်းစားဥမျိုးပေါ့။ အရွယ်အစားက ဟင်းသောက် ပန်းကန်အလတ်စားတစ်လုံးကို မှောက်ထားသလိုပဲ ခုံးလုံး ပြီး ကျစ်မာနေတာ ..ခွန်ဂျာဆိုတာကလည်း သိတဲ့အတိုင်း မိန်းမသေပြီးကတည်းက မလိုးရတာ ကြာပြီဆိုတော့ ဝိုင်းရဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးကို ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုက်စားဝါးမြိုပြစ်ချင်လောက်အောင် ဖြစ်နေတာ။ ထမီအထက်ဆင်စလေးကို ဆွဲဖြုတ်ပြီး ချွတ်ပြန်၏။ ဝိုင်း၏ အတွင်းခံ ဘရာဇီယာလေးက လည်ပင်း၌ ရောက်နေသလို ထမီကလည်း အောက်သို့လျောဆင်း သွားသည်။ စောက်မွှေလေးများ မစုံတစ်စုံ ပေါက်နေကြပြီဝိုင်းက အမွှေးနဲနဲသန်ချင်သည်။ စောက်မွှေးလေးများက ဆီးခုံမှာသာမဟုတ် စောက်ပတ်ဘေးပတ်လည်၌လည်း ခပ်ပါးပါး မှေးမှေးလေး ပေါက်နေသည်။ တခြားမိန်းက လေးတွေဆိုလျင် စောက်မွှေးများက ဆီးခုံမှာပဲရှိသည်။ စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းအထက်နားသို့ မရောက်မီ ခရီးဆုံးကြသည်။ ယခု ဝိုင်း အမွှေးနုနုလေးများက ပရေတိမြက် ခင်းပမာကျယ်ပြန့် လွန်းသည်ဟု ဆိုရမည်။
ခွန်ဂျာကလဲ စောက်မွှေးသန်သန်နှင့် ဝိုင်း၏ စောက်ဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်း မို့မို့ကြီးကိုကြည့်ပြီး လျပ်တစ်ပျက်အတွင်း၌ ရွယ်ရွယ့်ကို သတိရသည်။ သူ့ဘ၀၌ မိန်းမနှစ်ယောက်စောက်ဖုတ်ကိုသာ မြင်ဖူးခဲ့သည်ပဲမဟုတ်လား။ ရွယ်ရွယ်က ဝိုင်းထက်စာလျင်စောက်ပတ် ဗျက်သေးချင်သည်။ စောက်ပတ် နှုတ်ခမ်းသားလေးများက ထူထဲသော်လည်း ဘေးသို့ ဖြန့် ပြန့်ကားကားကြီးမဟုတ်။ ဝိုင်းစောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသား များကမူ ထူထူထဲထဲရှိ၏။ နခမ်းသားထူသဖြင့် စောက် ပတ်ကြီးက လက်ကြီးခုံးထားသလောက်ကို မို့မောက် ခုံး ထနေသည်။ အချိန်ပိုင်း နာရီပိုင်းအတွင်း မိမအလိုကို လိုက်နေရှာသော ဝိုင်းကို ခွန်ဂျာ ပိုမိုနှစ်သက် မြတ်နိုးရ၏။ ရွယ်ရွယ်တုန်းက မလုပ်ပေးဖူးသော ပြုစုခြင်းမျိုးကိုလဲ သူက တယုတယလေးပြုမူလိုက်သည်။ ဖေါင်းမို့စူကြွနေသော စောက်ဖုတ် အပေါ်နခမ်းစပ်လေးကို လျှာနှင့် အသာအယာအုပ်ယက်ပေးလိုက်၏။ ““အ..”” ဝိုင်း၏ တင်းတင်းစေ့ထားသော နှုတ် ခမ်းတွဲတွဲလေး ဇတ်ကနဲ ““ဟ””သွားကာ ဝေဒနာ တစ်ရပ်ခံစားးရသလို အသံလေးတစ်သံထွက်ပေါ်လာသည်။ လက်နှစ်ဖက်ကလည်း ခွန်ဂျာဆံပင်များကို ခပ်တင်း တင်းလေး ဆွဲကိုင်လိုက်သည်။ ““ကျွတ်.. မဟုတ်တာ ဟိတ်”” ဝိုင်းက သူ့ခေါင်း ကိုဖယ်ရှားရန် ကြိုးစားပါသေးသည်။ ဤမျှလောက်အထိ သူ့ကို မခိုင်းချင် မနစ်နာစေချင် သို့သော် သူက ခေါင်း မာသည်။ စောက်ပတ်နှစ်ခြမ်းကို ပါးစပ်နှင့် ငုံခဲကာ အကွဲ ကြောင်းထဲသို့ လျှာဖျားနွေးနွေးကြီးကို အထက်အောက် ဆုန်ကာဆန်ကာ ထိုးကလိပေးသည်။ ဝိုင်း ကြာရှည် တင်းမခံနိုင်။ ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ဘေးတစ်ဖက်ဆီသို့ ဖြဲချလိုက်၏။ ထိုအခါမှ ရင်ထဲ ဟင်းလင်းပွင့်သွားသည်။ စောက် ပတ်နှစ်ခြမ်းမှာလဲ တင်းတင်းစေ့နေသည့်ကြားမှ မဟတဟလေးဖြစ်နေ၏။ သူက လက်မနှစ်ဖက်ဖြင့် စောကပတ်ကို ဖြဲလိုက်သည်။ ထောင်းကနဲ အငွေ့ဟပ်လိုက်သော ပေါင်းအိုးထဲမှ အပူငွေ့ပမာ စောက်ပတ်အတွင်းမှ သန့်စင် မွှေး သင်းသော ဆပ်ပြာမွှေးရနံ့လေးကို ရှူရှိုက်မိလိုက်သည်။ ပါကင်ထုပ်တစ်ခုကို ဖွင့်လိုက်စဉ် ရရှိသော အနံ့အသက် ကဲ့သို့ စက္ကူသစ်အနံ့မျိုးကိုလည်း ရရှိ ရှူရှိုက်မိရပြန်သည်။
ဒါသည်ပင် အပျိုမလေး ဝိုင်းအုံချစ်၏ စောက်ပတ် အနံ့ လေးသာဖြစ်သည်။ စောက်ပတ်အသားလေးတွေက နူးညံ့နေသည်။ နှုတ်ခမ်းဖြင့် ထိသည့်တိုင် ထိမှန်းမသိ အောင် နုထွတ်နေသည်။ ပန်းနုရောင်ပြေးနေသော အတွင်းသားရဲရဲလေးများကို လျှာဖျားနှင့် ထိုး၍ ကလိ လိုက်သည်။ ““အ..အ အဟင့် ဟင့် ယား ယားတယ်”” လှိုင်း ထကုန်သည် ဖင်ကြီးက ကြတက်လိုက် ပြန်ကျလိုက်ဖြင့် လှုပ်ရှားခါယမ်းသွားလေသည်။ ဝိုင်းစောက်စိလေးက တင်းမာနေပြီဖြစ်၏။ စောက်စိလေး အောက်မှ ဂူပေါက် လေးသဖွယ် ပွင့်ဟနေသော ဆီးပေါက်ကလေးထိပ်ကို သူကလျှာထိပ်ဖြင့် အသာအယာထိုးကလိကာ ရစ်ဝိုက် ပေလိုက်သည်။ ““အား .. ရှူး ကျွတ် မခံနိုင်ဘူး အ အ”” ဝိုင်းကတုံကရီလေး ငိုသံပါနှင့်ပြောရင်း သူ့ခေါင်းကို ဆံပင် များစုဆွဲ၍ ဖယ်ရှားသည်။ မရ။ ပေကပ်ကာ စောက်ဖုတ်တစ်ခုလုံးကို သွားဖြင့် မနာမကျင်စေပဲ တဆတ်ဆတ် ကိုက်ပေးလိုက်ပြန်ရာ ဝိုင်းခမျာမှာ သေးဖြန်းဖြန်းပါချင် အောင်ခံစားလိုက်ရလေသည်။ ““တော် ..တော်ပါတော့ အဟင့် ဟင့် ဟင့်”” ““ပြွတ် ..အင်း ..ပြွတ် ပီ ပြွတ် အင်း”” သူကသန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သော ဝိုင်း၏ ပစ္စည်း ကြီးကို အလွန်အမင်း အရသာရှိသော စားသောက်ဖွယ် တစ်ခုပမာ မြတ်မြတ်နိုးနိုးလေး စုပ်ယက်ပေးနေပြန်ရာဝိုင်းမှာ မျက်ရည်လေးများ ဝေ့ဝဲလာလေတော့သည်။ စောက်ပတ်အတွင်းမှ ဇိကနဲ ဇိကနဲ သုတ်ရေများ ပန်း ထွက်ကုန်၏။ ““ဒုက္ခပဲ အဟင့် ထွက်ကုန်ပြီ ဟင့် အဟင့်”” ဝိုင်း သူ့မျက်နှာကို ပေကျန်ကုန်မှာစိုးလို့ ဆွဲဖယ်ပေမဲ့ သူက အပြစ်လိုက် အခဲလိုက် အဖတ်လိုက် အန်ကျ လာတဲ့ သုတ်ရည်များကို တမြတ်တနိုးလေး လျှာနဲ့သိမ်း ပြီး မြိုချလိုက်တာတွေ့ရတော ဝိုင်း သေချင်ရော ကွယ် အဲလောက် မလုပ်နဲ့ ကိုရယ်”” ဝိုင်းသူ့ကိုချော့မော့သော လေသံနှင့်ပြောပေမင့် သူက စောက်ပတ်အကွဲကြောင်း အောက်ဖက်၌ စုပြုံတစ်ဆို့နေသော စောက်ရေလေးများ ကို နှုတ်ခမ်းစူကာ တေ့ယူပြီး စုပ်ယူနေပြန်ရာ ဝိုင်းခမျာ သူ့ကို ဘယ်လိုသနားသွားမှန်းမသိ။ ““လိုးပါတော့ ကိုရယ်နော်”” ဝိုင်းထံမှ ညင်သာတိုးညှင်းသော အသံလေးကြားမှ သူက မော့ကြည့်သည်။ သူ့မျက်လုံးများက အချစ်ဆိပ် တက်ကာ ကြည်လဲ့နေလေသည်။ ““ကို လိုးရတော့မလား ဟင်”” ““အင်း .. ”” ဝိုင်းရှက်သည် ခေါင်းကို ငုံ့ရင်း အင်း ဆိုသောအသံကို မပွင့်တပွင့်လေးပြောလိုက်မိ၏။
သူက ပုဆိုးကို ချွတ်လိုက်သည်။ သူ့လီးက တောင်နေသည်ဆို သော်လည်း လီးအရင်းက ရှည်လျား တုတ်ခိုင်သော လီး အဖျားမှ အလေးချိန်စီးသည့် ဒစ်ပြဲကြီးကို မနိုင်မနင်း ဆွဲမ ထားရသည့်နှယ် ခပ်ငိုက်ငိုက်ကြီးဖြစ်နေသည်။ ဝိုင်းက နေရာမှ အသာထသည်။ ဘရာစီယာနှင့် အပေါ်အင်္ကျီ လေးက လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကို ချုပ်ထားသလိုဖြစ်နေ သောကြောင့် ဝိုင်းမျက်နှာလေးနှင့် ဒူးထောက်ထား သော သူ့လီးကြီးကနီးကပ်သွားလေသည်။ သူကတမင်ပဲလား မတော်တဆလားမသိ ရှေ့သို့တိုးလိုက်ရာ လီးထိပ် ရဲရဲ ကြီးက ဝိုင်းနှုတ်ခမ်းလွှာလေး နှစ်ခုကြားသို့ ရောက်ရှိ သွားသည်။ ဝိုင်း တစ်ကိုယ်ကောင်းမဆန်ချင် မတရား မဖြစ် ချင် သူ့လီးကြီးကို ဖြူဖွေးလှပသော လက်ချောင်းလေး များဖြင့် အသာအယာဆွဲယူကာ ပါးစပ်ထဲ ဆွဲသွင်း လိုက်၏။ သူ့လက်ကြီးနှစ်ဖက်က ဝိုင်း၏ ခေါင်းလးကိုစုံကိုင်ဆွဲပြီး လီးကြီးကို ရှေ့တိုးပေးလိုက်သည်။ လီးထိပ် ကြီးက ကိုင်းခရမ်းချဉ်သီးကြီးနှယ် တင်းမာပြောင်လက် နေပေရာ နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာအတွင်းသို့ ပြတ်ကနဲ တိုးဝင် သွားလေသည်။ ဝိုင်းလီးမစုပ်ဖူး မစုပ်တတ် သို့သော် ကို့ကို ချစ်သည့် စိတ်နှင့် ဒစ်ကြားသို့လျှာဖျားလေးထိုး သွင်းကာ ဒစ်ကို ရစ်ဝိုက်၍ စုပ်ပေးလိုက်၏။ ဟ အား ကောင်းလိုက်တာ ဝိုင်းရယ် ကို့မျက်နှာက မျက်နှာကျက် ဆီသို့မော့သွားသည်။ ပါးစပ်ကို ဟလျက် မျက်စေ့များ ကို ပိတ်ထားလိုက်ရှာသည်။ ဝိုင်းလီးစုပ်ပုံဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ ပြသနာမဟုတ် ““ကို ခံလို့ကောင်းသည်ဆိုလျင် ဝိုင်းကျေနပ်၏။ ထို့ကြောင့် လီးကြီးကိုအစွမ်းကု ငုံ့စုပ်ကာ အရင်း မရောက် တရောက်အထိ စုပ်ယူပြစ်လိုက်သည်။ ကို့ ဂွေးစိကြီးက အတွဲလိုက် ရှုံ့တက်သွားသည်ကို ဝိုင်းတွေ့လိုက်သည်။ လီးမွှေးကြမ်းရှရှကြီးများက ဖြူနုလှပသော ဝိုင်းမျက်နှာ လေးကိုထိကပါး ရိကပါး တိုးဝှေ့မိကြသည်။ လမွှေး များမျက်နှာကို တိုးဝှေ့မိခြင်းကပင် ဝိုင်းကြက်သီးလေး များ ဖြန်းဖြန်းထသွားရပြန်သည်။
ဘယ်လိုမှန်းလဲမသိပေ။ ““အာ ကို အစုပ်မခံဖူးဘူးဝိုင်းရဲ့ တော်ပြီ ထွက်ကုန်အုံးမယ်ကိုယ် ဝိုင်းခေါင်းလေးကို ဆွဲခွာရန်ကြိုးစားသည်။ ဒါဝိုင်းအလှည့်လေ မဟုတ်ဖူးလား ဘယ်ရမလဲ လီးခါးလည် လောက်ကို သွားနဲ့ခပ်ဖိဖိလေး ကိုက်ထားပြီး လီးထိပ်က အပေါက်လေးကို လျှာနဲပထိုးထိုးပေးလိုက်တယ်။ အိ အဝိုင်း ကျွတ် ကျွတ် ထွက်ပြီ ဟား အ .. ပါးစပ်ထဲကို သုတ်ရေတွေပြစ်ကနဲ ပြစ်ကနဲ ပန်းဝင်ကုန်တယ်။ အဲဒါ မှတ်ထား ဝိုင်းကျေနပ်သည်။ ဝိုင်းလဲ ကို့လိုပဲ ကို့ကိုချစ်တဲ့အကြောင်းပြရမယ်။ သုတ်ရေတွေကို မြိုချ ပြစ်လိုက်တယ်။ ““အို ဝိုင်းလေး အချစ်ရယ် ကျေးဇူး တင်တယ်။ အချစ်ပိုတဲ့ သူ့မျက်နှာကြီးကနီပြီး ရဲတွတ် နေတယ်။ သူ့တစ်ကိုယ်လုံးဟာ တဆတ်ဆတ်တုန်နေ သည်။ ဝိုင်းက ကို့လီးကြီးကို ရေခဲချောင်း စုပ်သလို စုပ်ပြီးမှ ကို့မျက်နှာကို ပြုံးပြုံးလေး မော့ကြည့်လိုက် သည်။ ““အရမ်းချစ်တာပဲလား ဝိုင်းလေးရယ် ဟင်”” ဝိုင်းက သုတ် ရေများကပ်ငြိနေသော နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို အသာအယာ ပြုံးကာ မျက်တောင်လေးများ မှိတ်ပြ၏။ ထို့နောက် အိပ်ယာထက်သို့လှဲချလိုက်သည်။ အတွယ် အတာမဲ့သော နို့နှစ်လုံးက ခါယမ်းသွားလေသည်။ ကုယ်က နုထွတ် ထွားကြိုင်းလွန်းသော ဝိုင်း၏ ရင်သား အစုံကို ကွဲရှတတ်သော ပစ္စည်းတစ်ခုနှယ် တယုတယဂရုတစိုက် ကိုင်လိုက်သည်။ နို့သီးခေါင်းရဲရဲလေးများ ကိုလက်ညှိုးနှင့်လက်မဖြင့်ညှပ်ကာ ပွတ်ချေပေးလိုက်သည်။ နို့သီးခေါင်းလေးများ တောင်တင်းလာသည်။ ဗိုက်သားဝင်းဝင်းလေးကို တစ်ချကနမ်းပြီးမှ စောက်ဖုတ်ကြီးကို လက်ဝါးကြီးဖြင့် အုပ်ခါ ပွတ်ခါ ပွတ်ခါ ဆွပေး၏။ စောက်ပတ်နှစ်ခြမ်းသည် ပွင့်အာသွားသည်။ ဘေးတစ် ဘက်ဆီသို့ ကားထွက်သွားသော ပေါင်တံကြီးနှစ်ဖက် ကို ကွေးကာ မြောက်တင်လိုက်သည်။ ထိုအခါ ဖေါင်း ကား ခုံးထနေသော ဝိုင်း၏ စောက်ပတ်ကြီးမှာ အလိုးခံရန် အသင့်အနေအထားသို့ ရောက်သွားလေသည်။ ပေါင် နှစ်ဖက်က ဗိုက်သားများနှင့် ပြန်ကပ်နေ၏။ ဒူး နှစ်ဖက်က ပုခုံးဆီရောက်အောင် ပင့်ထားသည်။ စောက် ပတ်ကြီးက လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကြီး ပြူးထွက်နေ၏။ ကိုက စောက်စိထိပ်ကလေးကို လီးထိပ်ဖြင့် အသာ အယာ ဖိပွတ်ထိုးဆွပြီး အကွဲကြောင်းအတိုင်း အောက် ဖက်သို့ လီးထိပ်ကြီးကို ဆွဲယူသည်။
တဖြင်းဖြင်း တသိမ့် သိမ့် အရသာသည် ဝိုင်းကိုယ်ခန္ဓာ တစ်ခုလုံးကို လွှမ်း ခြုံပစ်လိုက်ခြင်းခံရ၏။ လီးထိပ်ကြီးစောက်ပတ်အ၀ကို ရောက်တော့မယ် ရောက်တော့မယ်ဟု မျက်စိမှိတ် ခံစားရင်း ကို့လီးကြီး၏ ပူနွေးနူးညံ့သော လီးထိပ်မှအထိအ တွေ့ကို ရင်တခုံခုံနှင့်ခံစားရင်း လိုးဝင်သွားမည့် အချိန်ကို စောင့်နေမိသည်။ ““ဗြစ်..ပြွတ်”” ကျွံဝင်သွားသော လီးထိပ်ကြီးနှင့် စောက်ပတ်နှစ်ခြမ်းကြားမှ အစ်အစ် ကလေးထွက်လာသည်။ ““အ .. အီး အဟင့်ဟင့် ဝိုင်း အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို ဖိကိုက်ထားရင်း တင်းခံထား သော အသက်ကလေးကို အောင့်ထားလိုက်သည်။ ၀င်နေသည့်လီးတန်ကြီးက တရွေ့ရွေ့ စောက်ခေါင်းထဲ သို့ တိုးဝင်သွား၏။ ဝိုင်းစောက်ပတ်လေး ပထမဦးဆုံး အကြိမ် အလိုးခံရချေပြီ။ ““ပြွတ် ဘွတ်”” လီးကို တင်းတင်း စီးစီးလေး ဖိအသွင်း၌ စောက်ပတ်အတွင်းမှ လေများ““ဘွတ်””ခနဲ အန်ထွက်လာသည်။ ““ဟင့် အသံမြည်အောင် မလုပ်နဲ့ကွာ ဝိုင်းကရှက်သည်မို့ အခန်းတွင်း ဘယ်သူမှ မရှိမှန်းသိနေပါလျက် ဝေ့ဝဲကြည့်ကာ စိုးရိမ်သံလေးနှင့် ပြောမိ၏။ ““ပြွတ်ဘွတ် ပြွတ်ဘွတ် ပြွတ်ဘွတ်”” ဒီလောက် တော့မြည်တာပေါ့ ဝိုင်းကလဲ ဟင်း ရှက်စရာကြီးကွယ် အို ဝိုင်းကလဲ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ထဲရှိတဲ့ဟာပဲ နောက် အရေတွေ ထပ်ထွက်လာရင် ပိုမည်သေးတယ်။ ““ဟလားဝိုင်းက အသံမြည်တာ ရှက်လို့”“ မရှက်ပါနဲ့ဝိုင်းရယ်ဒါဓမ္မတာပဲဥစ္စာ တီးတိုးအသံလေးများ နူးညံ့စွာ ထွက်ပေါ်နေစဉ်မှာပင် ကို့ဖင်ကြီးက တသိမ့်သိမ့် လှုပ်ခါယမ်းကာ တဖြေးဖြေး အဆောင့်ကြမ်းလာသည်။ ခွန်ဂျာက ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ကာ ဝိုင်း၏ ခါးလေးကိုတင်းတင်းရင်းရင်းကြီးကိုင်ကာ စက်သေနတ် ပစ်သလိုပင် ဆက်ခါဆက်ခါ ဆောင့်လိုက်လေရာ ဝိုင်း စောက်ပတ်လေးနှင့် ခွန်ဂျာ့ဆီးခုံကြီးဖေါင်းကနဲ ဖေါင်းကနဲမြည်အောင်ပင် ရိုက်ခပ်မိသွားပြီး.. စောက် ပတ်တစ်ခုလုံး ထူပူသွားလေသည်။ ““ကို..ရက်စက် တယ် အ အ အ ပြွတ် ပြွတ် ဘွတ် ဘွတ် ပြွတ် ဘွတ်ဝိုင်းသည် အရူးမီးဝိုင်းသလို ခေါင်းကို တအားခါယမ်း မိ၏။ စောက်ပတ်အတွင်းသို့ သံချောင်းကြီး တစ်ချောင်း အလား စူးကနဲ နင့်ကနဲဝင်လာသော လီးကြီးက အဆုံး အထိဝင်ကာ သားအိမ်ခေါင်းကို ““ထုတ်”ကနဲ ““ထုတ်””ကနဲ ဆောင့်မိသွားသည်။
ဆီးစပ်တစ်ခုလုံးကျင်သွားကာ ရှိန်း ကနဲ လှပ်စစ်ဓါတ်တွေ စီးဝင်သလို တုံတုံခါခါလေး ခံစား လိုက်ရလေသည်။ ““ထွက် ထွက်ကုန်ပြီ ဝိုင်း ..အ အ အ”” ကိုက ဝိုင်းအပေါ်သို့ ကမ်းကတမ်းမှောက်ချလိုက်ခါ ဖင်ကို ဆက်ခါ ဆက်ခါ မြောက်၍ ဆောင့်လိုးလိုက်၏။ လီးတစ်ချောင်းလုံး တဖြင်းဖြင်း မာတင်းသွားသည်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပင် တင်းကနဲ တင်းကနဲဖြစ်ခါ လီးရေများကို ပန်းထုတ်လိုက်လေတော့သည်။ ဆောင့်ဆောင့် အ အ ကောင်းလာပြီ အိုးအိုး ဝိုင်းက ကိုယ့်ဖင်ကြီးကို မရှက်နိုင်တော့ပဲ ဆွဲကာ ဆွဲကာ ဖိချရင်း ခါး လေးကို ကော့ကော့ပေးလိုက်လေသည်။ လီးတန်ကြီးက အဆုံးအထိ ၀င် ၀င်သွားကာ စောက်ပတ်အတွင်းရှိ အသားမျှင်များကိုထိုးပွတ် ဆောင့်လိုးမိသွားလေသည်။ ““ကောင်းတယ် .. အ .. အရမ်းကောင်းတယ်ကိုရယ် နာနာလေးဆောင့်စမ်းပါ အ ..အ”” ဝိုင်း နှုတ်ခမ်းလေးများ တဆတ်ဆတ်တုံနေကာ လက်ချောင်းလေးများ ကုတ်ကွေးကာ ခွန်ဂျာဖင်များကို အ၀တ်စ တစ်ခုနှယ် ဆုတ်ကိုင်ကုတ်ဖဲ့လိုက်မိလေ၏။ စူးကနဲလက်သည်းများ နစ်ဝင်သွားသည်ဟု ခံစားလိုက်ရသော ခွန်ဂျာသည် စူးထိုးခံရသော ကျားသစ် တစ်ကောင်နှယ် ““အီး ကနဲ အီးကနဲ အသံမြည်အောင် ပင် ဝိုင်းအုံချစ် စောက်ပတ်လေးထဲသို့ သူ၏ ကြိးမား တုတ်ခိုင်လှသောလီးကြီးကို အားရပါးရကြီး ဆောင့်လိုး လိုက်လေရာ ..။ ““ပြွတ်..ဘွတ်..ပြွတ်ဘွတ်..ပြွတ်ဘွတ်”” ““အအား .. အအား .. အအား ..ဟား..ကျွတ်..ကျွတ် ..”” ဝိုင်း မျက်ဝန်းထဲ၌ မီးပွင့်များ ဖြာထွက်ကုန် ပလားထင်မှတ်ရအောင်ပင် ခံစားလိုက်ရလေသည်။ စောက်ခေါင်းအတွင်းပင် ကျင်ကနဲ ကျင်ကနဲ ဖြစ်ခါ ထိန်းမရတော့ပဲ .. ဝိုင်းက သုတ်ရေများကို လွှတ် ထုတ်မိလိုက်လေသည်။ ““ကောင်းလိုက်တာ .. ကိုရယ် .. အ .. အ .. အ ..”” ဝိုင်းက ခွန်ဂျာလည်ပင်းကို ဆွဲယူလျက် ပါးပြင် ကို နမ်းရင်း ကျေကျေနပ်နပ်လေး ရေရွတလိုက်လေ သည်။ ခွန်ဂျာက ဝိုင်း၏ နှုတ်ခမ်းလေးကို အသာအယာ ဖိကပ်စုပ်ယူရင်း ဖင်ကြီးကို ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ ဆောင့်လိုက်ရာ နှစ်ဦးစလုံး ထွန့်ထွန့်လူးသွားကြရ လေပေသည်။ ““ဝိုင်း.. ရယ် ချစ်လိုက်တာကွယ်”” ““ချစ်..ချစ်..အားရအောင် ချစ်စမ်းပါ ကိုရယ်..”” ““ဝိုင်းအုံချစ်ဆိုသော ကောင်မလေး တစ် ယောက် အရူးအမူးဖြစ်ခါ လီးအရသာကို တွေ့နေခိုက်”” နှစ်ရှည်လများ မိန်းမ မလိုးခဲ့ရသော ခွန်ဂျာကလည်း နောက်ထပ်တစ်မျိုး တစ်ပုံစံနှင့် လိုးရန်အတွက် ဝိုင်းအုံ ချစ်ကို တီးတိုးလေးပြောလိုက်သည်။ “
“ဝိုင်း ..မောသလား ..ဟင်”” ““အင် ..ကိုက အရမ်းကြမ်းတာ”” “ချစ်တာကိုး . ဝိုင်းရဲ့”” ““ကိုချစ်တာက ကြောက်စရာကြီးကွယ်”” ““ဝိုင်း .. ဝိုင်းလေးရယ်”” ““ဟင် ..ဘာလဲကွယ် .. ခေါ်လိုက်တာ မ မောဘူးလား”” ““နောက်တစ်မျိုးလုပ်ရအောင်နော်”” ““သဘောလေ .. ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ”” ““ဝိုင်းက ကုန်းပေးလေ”” ““အာကွာ .. ဝိုင်းဖင်ကြီးကို နောက်က ကြည့် မှာ ရှက်တယ်”” ““ဒါဖြင့် မကုန်းဘူးလား .. ပြော”” ခွန်ဂျာက မျက်နှာညိုပြသည် .. နှုတ်ခမ်း စူပြ သည်။ ခွန်ဂျာ့အမူအယာကို သဘောကျသလိုရယ်ရင်း ဝိုင်းက ခွန်ဂျာ့ပုခုံးကို ဖတ်ခနဲ ပုတ်လိုက်သည်။ ““ဖြစ်သွားလိုက်တာ ..မျက်နှာကြီးက .. ကုန်းပါ့မယ်ရှင်..ကုန်းပါမယ်တဲ့ ..ကဲ”” ခွန်ဂျာ၏ကျေနပ်စွာ ရယ်မောသံက ၀န်းကျင်ကို လွှမ်းမိုးသွားတော့သည်။ ““ခံစားနိုင်ကြပါစေ…””